Maitiro ekuisa yepamutemo Spotify application paDebian 9 | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuisa yepamutemo Spotify app paDebian 9
Iyo Spotify sevhisi inozivikanwa kwazvo yekushambadzira mimhanzi sevhisi, kwete chete pakati pevanoda smartphone asiwo pakati pevashandisi vanoshandisa yavo laptop kana desktop desktop zuva nezuva. Spotify ine yepamutemo mutengi kune ese mapuratifomu, kusanganisira Gnu / Linux, kunyangwe tichifanira kutaura kuti zviri pamutemo Spotify zvakadaro haikurudzire Gnu / Linux sepuratifomu yekushandisa.
Uye kunyangwe izvi, isu tave nazvo sarudzo mbiri dzekuisa yepamutemo Spotify mutengi.
Idzi nzira mbiri dzinogona kuiswa paDebian 9 uye inoshanda zvizere mukati meiyi Gnu / Linux kugovera. Takatotaura newe nezvenzira yekutanga yekumisikidza. Muizvi chinyorwa Isu tinokuudza iwe zvakadzama maitiro ekuisa iyo yepamutemo Spotify mutengi kuburikidza nekunze zvekuchengetedza. Asi ndinotenda mafomati matsva epasirese epakeji, tinokwanisa kuisa yepamutemo Spotify mutengi nemirairo mishoma.
Pane nzira mbiri dzakasiyana dzekumisikidza yepamutemo Spotify mutengi paDebian 9
Kutanga isu tinofanirwa kuisa iyo snapd maneja, iyo snap app maneja. Kuti tiise iyo, isu tinongofanirwa kuvhura iyo terminal uye tinyore zvinotevera:
Mushure memaminetsi akati wandei kurodha pasi nekuisa mapakeji anodikanwa, isu tinogona ikozvino kuisa iyo Spotify application seinotevera:
<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>sudo snap install spotify
Iye zvino isu tine yepamutemo Spotify mutengi. Kuivhura, kana isu tinotsvaga iyo mumenu yeiyo graphic desktop kana isu tinonyora mune terminal «Spotify» inoteverwa nekiyi yekupinda, mushure mezvo chirongwa chatakaisa chichaitwa.
Wepamutemo Spotify mutengi chirongwa chikuru asi parizvino kune zvimwe zvisiri pamutemo zvinoshandiswa zvine mamwe mabasa sema desktop applet kana kure kure. Chero zvazvingaitika, iyi application ichiri kunakidza kumisikidza mazuva edu ekushanda Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa yepamutemo Spotify app paDebian 9
"... Gnu / Linux inosanganisirwa, kunyangwe tichifanira kutaura kuti Spotify zviri pamutemo hazvikurudzire Gnu / Linux sedandaro rekushandisa."
Chinyorwa ichi ndechei? Kana vakasazvikurudzira, zviri nani kuti tirege kuzvishandisa, ngavazviise kuburikidza neQlo.
Zvingave here kuti ivo vasingakurudzire GNU linux pane spotify nekuti vanogona kutisora ​​zvishoma?
Zvakanaka, maererano neshoko rapfuura, kana iwe usingakurudzire GNU linux saka hatikurudzire kushandisa spotify.
Pindura kuna fernan
Steam yeLinux pakupedzisira inowana 4K yekutarisa rutsigiro
Maitiro ekuisa Firefox 58 pane Debian 9